Kaonty Twitter Sandoky Ny Filoha Armeniana Maka Tàhaka ilay Tena An’ny Filoha Azerbaijani · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Oktobra 2015 8:21 GMT
Ny Filoha Sargsyan. Wiki image.
Ho an'i Serzh Sargsyan, Filohan'i Armenia, taraiky loatra ny fireneny raha mitaha amin'i Azerbaijan ao amin'ny Twitter, tonga ny fotoana mba hakàny toerana ho azy ao amin'ny media sôsialy sy hiarovana azy io. Saingy satria tsy dia karazan'olona mpibitsika loatra i Sargsyan, tsy toy ilay mpifanandrina mahery vaika ara-politika aminy, dia nianjera taminà fanaovana kaonty hàla-tàhaka mba hanoherana ilay fahataràna sy hisaorana an'i Armenia aty anaty tambajotra.
Ny kaonty Twitter ofisialin'ny Filoha Azerbaijani, Ilham Aliev, no iray amin'ireo kaonty tena mampiala voly indrindra amin'ny media sôsialy ao amin'ity faritra Sovietika teo aloha ity. Na tsy misy sary aza, ny teny mivantambantana ao, sy ny tsy fahatakarany ny fotokevitry ny hoe bitsika (vitsy amin'ireo fifandraisana avy amin'i Aliev no voafehy ao anatin'ny voanteny 140) dia mahatonga azy ho mendrika hifaninana amin'ilay an'ny Filoha Chechen, Ramzan Kadyrov, dokadokafana be ao amin'ny Instagram.
Fanamaivamaivànana fomba fiteny ny fitenenana hoe tsy mifampitondra am-po i Armenia sy Azerbaijan. Efa nisy ady nifanaovan'ny firenena roa tonta mikasika ny sisintany ifandroritana ao Nagorno-Karabakh, talohan'ny nahazoana fahaleovantena avy amin'ny Firaisana Sovietika tamin'ny 1991.
Ilay ady — izay nahitàna an'i Baku sy Yerevan nifampiampanga ho nanao fanadiovana foko satria an'arivony maro no maty ary an-tapitrisa no nafindra toerana — dia naharitra hatrany amin'ny tapaky ny andian-taona 1990 ary nandindona ny hiverina hipoaka indray hatreo. i Rosia patirao, raha tokony hitàna ny toeran'ny mpandamin-draharaha, dia sady mahay atsy no mahay aroa, mivarotra fitaovampiadiana amin'i Azerbaijan no sady mitazona toby iray famaharan'ny tafika ao Armenia.
Tondro iray milaza ny fihenjanana eo amin'ny roa tonta ny Twitter-n'i Aliev, izay tototry ny hatezerana tsy miato manohitra an'i Armenia.
Azerbaijan, niharan'ny fampihorohoroana, dia mirotsaka mandrakariva amin'ny ady atao amin'ny fampihorohoroana erantany
Fanafihana efa maherin'ny 30 no nataon'ireo fikambanana Armeniana mpanao asa fampihorohoroana tao amin'ny tanin'ny Azerbaijan. Toy ny..
Tafiditra ao anatin'ny politika fibodoana ny tanin'i Azerbaidjan ireo fanafihan'ny mpampihorohoro mamely an'i Azerbaijan, izay …
Tsy hoe fotsiny mampiseho ny fanitsakitsahana ny lalàna iraisampirenena, fa ny fenitra rehetra momba ny zon'olombelona ihany koa, ny fibodoan'ny Armeniana ireo tanin'ny Azerbaijani
Mamaly bontana ankehitriny ireo mpitantana tsy mitonona anarana an'ilay kaonty sandok'i Sargsyan :
Mandre fankasitrahana herisetra isika isanandro, isanandro isika mandre fandrahonana sy fiezahana hampitahorana antsika…Tsy maniry ady isika ary tsy naniry izany velively, saingy….nanohy
….nandritry ny ady tao Karabakh tsy maintsy niaro ny Tanindrazantsika isika. Raha tonga indray ny fotoana, amin'io indray mandeha io ho farany sady mahafaty ny kapoka ataontsika
Ny tena mandranitra indrindra, nibitsika saripika ‘Armenia Mahafinaritra‘ ilay kaonty, izay nahitàna ny faritra atsimo-atsinanan'i Nagorno-Karabakh izay heverin'i Azerbaijan ho azy.
Noforonina tamin'ny 26 Oktobra, 22 monja no mpanjohy ilay kaonty hatramin'ny fotoana nanoratana ity lahatsoratra ity — mbola lavitra ny 168.000 ananan'ny an'i Aliev.
Saingy ao anatin'ny fifandonana ara-tafika tsy mitsaha-mitombo ao amin'ny sisintany Azeri-Armeniana, samy mendrika harahana ireo kabary tsara lahatry ny @Armenia_Pres sy @presidentaz.
Tsy mbola vita ny ady. Vao ny dingana voalohany io. Nefa mety hanomboka tsy ho ela koa ny dingana faharoa